23-ka September- Maalinta caalamiga ee afka tilmaanta | Radio Himilo
Home / Maalmaha Caalamiga / 23-ka September- Maalinta caalamiga ee afka tilmaanta
23-ka September- Maalinta caalamiga ee afka tilmaanta
Posted by: Mahad Mohamed September 23, 2019
Himilo- Ku dhawaad 72 Milyan oo qofood ayaa naafo ka ah maqalka caalamka oo dhan. 80% dadkaasi waxay ku nool yihiin dalalka soo koraya. Wadar ahaan, waxay adeegsadaan 300 luqadood oo ah afafka kala duwan ee tilmaanta sida laga soo xigtay midowga caalamiga ee dhagoolada.
Luqadda tilmaanta waa afka garashada ee dadka naafada ka ah maqalka, waxaana afka laga dharaan dhariyay luqadaha lagu hadlo.
Waxaa jirta luqad tilmaanta caalamiga ah oo dadka naafada ah adeegsadaan marka ay ka qeyb galayaan shirarka waaweyn ama ay safrayaan.
Heshiiska xuquuqda dadka naafada ah ayaa aqoonsanaya islamarkaana dhiira gelinaya luqadda tilmaanta. Waxa uu caddeynayaa in afkan uu lamid yahay luqadaha lagu hadlo iyadoo uu waajib ka dhigayo in la fududeeyo barashadeeda.
Golaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa 23-ka bisha September u asteeyay maalinta caalamiga ee afka tilmaanta si loo kordhiyo wacyiga luqadan iyo ahmiyadeeda iyadoo laga fiirinayo xuquuqda dadka naafada ah.
Markii ugu horreysay, waxaa la xusay maalintan 2018-kii, waxaana sannadkan hal-ku-dheg loo qaatay “Luqada tilmaanta- xuquuq dadka leeyihiin”
Previous: Maqal- Casharka Abuu Shujaac: Darsiga 7aad
Next: Neville oo u sheegay United inay la soo wareegaan shan xiddig kaddib guuldaradii West Ham